အာင်မြင်ဖို့အတွက် ဒီအချက် (၅) ချက်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ - Motivsuccess
The Khant| June 3, 2019 |
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ၂၁ ရာစုဟာ အရမ်းကို ပြိုင်​ဆိုင်​မှု ပြင်းထန်​တဲ့ ရာစုနှစ်​တစ်​ခုပါ။ တိုးတက်​မှုဟာလည်း အရမ်းကိုမြန်​ဆန်​ပါတယ်​။ ဒီလို ပြိုင်​ဆိုင်​မှုပြင်းထန်​ပြီး၊ တိုးတက်​ပြောင်းလဲမှုတွေ အများအပြားရှိတဲ့ ခေတ်​ကြီးထဲမှာ ခိုင်​ခိုင်​မာမာ ရပ်​တည်​နိုင်​ဖို့ဆိုတာ မလွယ်​ကူပါဘူး။ တောင်းဆိုမှုတွေလည်း အင်​မတန်များလှပါတယ်​။ ဒါကြောင့်​ လူတိုင်းဟာ အချိန်​ကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချပြီး မိမိရောက်​လိုတဲ့ ပန်းတိုင်​ကိုရောက်​အောင်​ ကြိုးစားအားထုတ်​ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်​။ လူအများစုဟာလည်း ကြိုးစားနေကြပါတယ်​။ တချို့လူတွေက အောင်​မြင်​မှုကို လျင်​လျင်​မြန်​မြန်​ရတယ်​၊ တချို့က အချိန်​အတိုင်းအတာတစ်​ခုအထိ စောင့်​ရတယ်​။ တခြားလူတွေ အောင်​မြင်​မှုကိုရနေတဲ့အချိန်​ သင်​ကရောဘာကြောင့်​မရနိုင်​သေးတာလဲ? သူတို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်​ သင်​က ဘာကြောင့်​ ကြိုးစားမနေတာလဲ? မေးမယ်​ဆိုရင်​မေးခွန်းတွေကတော့ အများကြီးထွက်​လာမှာပါ။ ဒါဆို အခုပဲ “အောင်မြင်ဖို့အတွက် ဒီအချက် (၅) ချက်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို လေ့လာပြီး မိမိကိုယ်​ကိုပြုပြင်​ပြောင်းလဲလိုက်​ကြရအောင်​။
၁။ ပျင်းရိခြင်းကို စွန့်လွှတ်ပါ
တက်​တက်​ကြွကြွနဲ့ လုပ်​ငန်းတွေကို ဆောင်​ရွက်​နေတဲ့လူတွေရှိသလို ဘာမှလုပ်​ချင်​စိတ်​မရှိဘဲ ပျင်းရိနေတဲ့လူတွေလည်း အများအပြားရှိပါတယ်​။ ပျင်းရိခြင်းကတော့ လူအများစုအတွက်​ အောင်​မြင်​မှုကိုသွားတဲ့ လမ်းပေါ်မှာ ကြီးမားတဲ့ အတားအဆီးကြီးတစ်​ခုဆိုရင်​လည်းမမှားပါဘူး။ အလုပ်​လုပ်​မှာကိုပျင်းနေရင်​ အနာဂတ်​မှာ ထမင်းနပ်​မှန်​မှန်​စားရဖို့တောင်​ မသေချာပါဘူး။ ကျွန်​တော်​တို့ လူငယ်​အများစုဟာ အလုပ်​(ပန်းတိုင်​ကိုရောက်​အောင်​)ကြိုးစားမယ့်​အစား တစ်​နေကုန်​ TV ထိုင်​ကြည့်​၊ သီချင်းနားထောင်​၊ ဂိမ်းဆော့ စသည်​ဖြင့်​ တခြားအရာတွေမှာ အချိန်​ကုန်​နေကြပါတယ်​။ အထက်​ဖော်​ပြပါအရာတွေကို မလုပ်​ရဘူးလို့ ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်​ပါဘူး။ အချိန်​ အကန့်​အသတ်​လေး ထားဖို့တော့ သတိပေးချင်​ပါတယ်​။ အလုပ်​ကို တက်​တက်​ကြွကြွနဲ့ အာရုံစူးစိုက်​ပြီးလုပ်​လေ အောင်​မြင်​မှုကိုမြန်​မြန်​ရရှိဖို့ အခွင့်​အရေးများလေပါပဲ။
၂။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို ခေါင်းထဲကထုတ်ပစ်ပါ
လောကမှာ တချို့လူတွေအောင်​မြင်​နေကြတယ်​ဆိုတာ မှန်​ပါတယ်​။ ဒါပေမယ့်​ အခုအချိန်​ထိ သင်​ မအောင်မြင်​သေးလို့ စိတ်​ဓာတ်​ကျ၊ အားငယ်​စရာမလိုပါဘူး။ လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်​အချိန်​နဲ့ကို သွားနေကြတာပါ။ တချို့က ငယ်​ငယ်​ရွယ်​ရွယ်​နဲ့ အောင်​မြင်​မှုကိုရရှိတယ်​။ တချို့ကအသက်​ကြီးမှ အောင်​မြင်​မှုကိုရရှိတယ်​။ ဥပမာ – အမေရိကန်​ပြည်​ထောင်​စုရဲ့ ၄၄ ဆက်​မြောက်​သမ္မတ မစ်​စတာ အိုဘားမား ဟာဆိုရင်​ အသက်​ ၄၈ နှစ်​အရွယ်​မှာ သမ္မတ ဖြစ်​တယ်​။ ၄၅ ဆက်​မြောက်​ သမ္မတ မစ္စတာ ဒေါ်နယ်​ ထရန့်​ ကျတော့ ၇၁ နှစ်​မှ သမ္မတ အဖြစ်​ တာဝန်​စတင်​ထမ်းဆောင်​တယ်​။ ဘယ်​အသက်​အရွယ်​မှာ ဘာဖြစ်​ရမယ်​လို့လဲ ပုံသေနည်းမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်​ ဒီ နံပါတ်​ ၂ အချက်​ကိုဖြေရှင်းဖို့ ကိုယ်​ ဘာကိုစိတ်​ဝင်​စားတယ်​ဆိုတာကိုရှာဖွေပါ၊ စိတ်​ဝင်​စားတဲ့အရာကို ဘယ်​လို အကောင်​အထည်​ဖော်​မယ်​ဆိုတာကို စီစဉ်​ပါ၊ မသိရင်​လည်း အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ သူတွေဆီကနေသင်​ယူပါ၊ လိုအပ်​တဲ့ ပညာရပ်​တွေကိုလည်း လေ့လာပါ။
၃။ အလွယ်တကူ အရှုံးမပေးပဲ ဇွဲရှိရှိနဲ့ ကြိုးစားပါ
တရုတ်​နိုင်​ငံအခြေစိုက်​ Alibaba Company ရဲ့တည်​ထောင်​သူ ဂျက်​မားကိုတော့ လူတိုင်း သိကြမယ်​ထင်​ပါတယ်​။ တရုတ်​နိုင်​ငံမှာရှိတဲ့ အချမ်းသာဆုံးလူတွေထဲကတစ်​ယောက်​ဆိုရင်​လည်းမမှားပါဘူး။ ကျွန်​တော်​တို့အခုမြင်​နေရတာကတော့ သူ့ရဲ့ ကြီးကျယ်​ခမ်းနားတဲ့ အောင်​မြင်​မှုတွေပါ။ ဒီအောင်​မြင်​မှုတွေကို ဘာမှမလုပ်​ပဲ အလကားရလာတာမဟုတ်​ပါဘူး။ ကြိမ်​ဖန်​များစွာကြိုးစားခဲ့ဖူးသလို ကျလည်းကျရှုံးဖူးခဲ့ပါတယ်​။ တရုတ်​ပြည်​ကို KFC ဆိုင်​ရောက်​လာတဲ့အချိန်​ အလုပ်​သွားလျောက်​တယ်​။ အယောက်​ ၃၀ မှာ ၂၉ ယောက်​ အရွေးခံရတယ်​။ သူမပါဘူး။ ရဲစခန်းမှာ လူခေါ်နေတုန်းသွားလျောက်​ပြန်​တော့လည်း ၅ ယောက်​မှာ ၄ ယောက်​အရွေးခံရတယ်​။ သူတစ်​ယောက်​တည်းကျန်​ခဲ့တယ်​။ အမေရိကန်​နိုင်​ငံက Harvest တက္ကသိုလ်​ဝင်​ခွင့်​သွားလျောက်​တော့လည်း ၁၀ ကြိမ်​တိုင်​တိုင်​ အပယ်​ခံခဲ့ရတယ်​။ ဒါပေမယ့်​ သူ ဘယ်​တော့မှလက်​မလျော့ခဲ့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ အရှုံးမပေးပဲ ဇွဲရှိရှိနဲ့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ရလဒ်​ကတော့ ဘီလီယံနာသူဌေးကြီးဖြစ်​နေတာပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့်​ သင်​ကြိုးစားနေသရွေ့ ဘယ်​တော့မှ ကျရှုံးမှာမဟုတ်​ပါဘူး။
လူတိုင်းဟာ တစ်​နည်းမဟုတ်​၊ တစ်​နည်းနဲ့ အချိန်​ဆွဲနေကြတာပါပဲ။ နည်းတာ၊ များတာပဲကွာမှာပါ။ ဘာကြောင့်​ လူတွေ အချိန်​ဆွဲကြတာလဲ? အချိန်​ဆွဲရင်​ရော ဘယ်​လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရလို့လဲ? အချိန်​ဆွဲတယ်​ဆိုတာ အချိန်​ကို ကြိုးနဲ့ချည်​ပြီးဆွဲတာတော့မဟုတ်​ပါဘူး။ မိမိလုပ်​ကိုလုပ်​ရမယ့်​ အလုပ်​(ကိစ္စ) တစ်​ခုကို မလုပ်​ပဲ တစ်​ခြားတစ်​ခုကို လုပ်​နေတာမျိုးကိုဆိုလာပါတယ်​။ ဥပမာ – နောက်​တစ်​ပတ်​ ဖိုင်​နယ်​ စာမေးပွဲ ဖြေရတော့မယ်​။ စာကျက်​ကိုကျက်​ရတော့မယ့်​ အခြေအနေ။ ဒါပေမယ့်​ စာကျက်​မယ့်​အစား သူငယ်​ချင်းတွေနဲ့ လျှောက်​သွား၊ ဂိမ်းဆော့၊ TV ကြည့်​ စသည်​ဖြင့်​ တခြားအရာတွေကို လုပ်နေတာမျိုးပါ။ အဲ့ဒီအချိန်​မှာ တခြားအရာတွေက မိမိလုပ်​ရမယ့်​ အရာထက်​ ပိုပြီး ဆွဲဆောင်​မှုရှိနေနိုင်​ပါတယ်​။ ဒါ့ကြောင့်​ပဲ ဒီလိုအချိန်​ဆွဲနေရင်​ ကိုယ်​ရနိုင်​တဲ့ ရလဒ်​ကိုမရပဲ ပိုနိမ့်​တဲ့ရလဒ်​မျိုးကိုရနေတတ်​တာပါ။ အချိန်​ဆွဲတာနဲ့ ပတ်​သတ်​ပြီးတော့ ကျွန်​တော်​ ဆောင်းပါးလေးတစ်​ပုဒ်​ရေးဖို့ရှိပါတယ်​။ အဲ့ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ အချိန်​ဆွဲတာနဲ့ ပတ်​သတ်​တဲ့ ဗဟုသုတတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာပါ။
မအောင်​မြင်​တဲ့လူတွေမှာရှိတဲ့ အထင်​ရှားဆုံးလက္ခဏာတွေထဲကတစ်​ခုကတော့ သူများကို အပြစ်​တင်​ခြင်းပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ ဒီလိုလူတွေဟာ သူတို့လိုချင်​တာကို မရရင်​ အဲ့ဒီဖြစ်​ရပ်​နဲ့ သက်​ဆိုင်​တဲ့ အရာတွေကို အပြစ်​တင်​တတ်​ကြပါတယ်​။ တာဝန်​ယူမှု၊ တာဝန်​ခံမှုလည်း ရှိသင့်​သလောက်​မရှိကြပါဘူး။ ဥပမာ – အဖွဲ့အစည်းက ချမှတ်​ထားတဲ့ ပန်းတိုင်းတစ်​ခုကို အတူတူလုပ်​ဆောင်​ကြတယ်​။ အောင်​မြင်​မှုကိုရခဲ့ရင်​ သူတို့အများစုက နာမည်​ကောင်းယူတယ်​။ ဒါပေမယ့်​ မအောင်​မြင်​ရင်​ တခြားသူတွေကို အပြစ်​တင်​တယ်​။ ဒါကတော့ တော်​တော်​လေးကို မကောင်းတဲ့ စရိုက်​ထဲမှာလည်း ပါပါတယ်​။ လူတိုင်းစိတ်ဓာတ်​ကျနေတဲ့အချိန်​ သူတို့ကို အပြစ်​သွားတင်​ရင်​တော့ အဲ့ဒါဟာ တကယ့်​ကိုဆိုးရွားတဲ့ လုပ်​ရပ်​ပါပဲ။ အဲ့လိုအပြစ်​တင်​နေမယ့်​အစား အမှားတွေကနေသင်​ခန်းစာယူ၊ လိုအပ်​တဲ့ skill တွေကိုလေ့လာ၊ အပေါ်မှာဖော်​ပြခဲ့တဲ့ အချက် ၄ ချက်​စလုံးကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။ ဒီလိုဆိုရင်​တော့ အောင်မြင်မှုက သင့်ရဲ့ လက်တစ်ကမ်းမှာ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
အပေါ်မှာ ဖော်​ပြခဲ့တဲ့ အချက်​တွေအကုန်​လုံးဟာ သင့်​အတွက်​ အကျိုးရှိမယ်​လို့မျှော်​လင့်​ပါတယ်​။ အကြံပြု၊ ဖြည့်​စွက်​လိုတာရှိရင်​ comment မှာရေးသားဖြည့်​စွက်​နိုင်​သလို Chat box ကလည်းလာရောက်​ အကြံပြုနိုင်​ပါတယ်​။ သင်​ဖတ်​ချင်​တဲ့ ခေါင်းစဉ်​လေးတွေရှိရင်​လည်း comment မှာရေးထားခဲ့နိုင်​ပါတယ်​။ ဖတ်​ရှုသူတွေအတွက်​ အကျိုးရှိပြီး အရည်​အသွေးပြည့်​မှီတဲ့ ဆောင်းပါးတွေရေးဖို့ ကျွန်​တော်​တို့ အမြဲကြိုးစားနေပါတယ်​။ အဆုံးထိ ဖတ်​ပေးတဲ့အတွက်​ ကျေးဇူးအထူးတင်​ရှိပါတယ်​။ Please don’t forget to like and see first! ?
“အောငျမွငျဖို့အတှကျ ဒီအခကျြ (၅) ခကျြကို လိုကျနာဆောငျရှကျပါ”
အားလုံးသိကွတဲ့အတိုငျး ၂၁ ရာစုဟာ အရမျးကို ပွိုငျ​ဆိုငျ​မှု ပွငျးထနျ​တဲ့ ရာစုနှဈ​တဈ​ခုပါ။ တိုးတကျ​မှုဟာလညျး အရမျးကိုမွနျ​ဆနျ​ပါတယျ​။ ဒီလို ပွိုငျ​ဆိုငျ​မှုပွငျးထနျ​ပွီး၊ တိုးတကျ​ပွောငျးလဲမှုတှေ အမြားအပွားရှိတဲ့ ခတျေ​ကွီးထဲမှာ ခိုငျ​ခိုငျ​မာမာ ရပျ​တညျ​နိုငျ​ဖို့ဆိုတာ မလှယျ​ကူပါဘူး။ တောငျးဆိုမှုတှလေညျး အငျ​မတနျမြားလှပါတယျ​။ ဒါကွောငျ့​ လူတိုငျးဟာ အခြိနျ​ကို အကြိုးရှိရှိအသုံးခပြွီး မိမိရောကျ​လိုတဲ့ ပနျးတိုငျ​ကိုရောကျ​အောငျ​ ကွိုးစားအားထုတျ​ဖို့လညျးလိုအပျပါတယျ​။ လူအမြားစုဟာလညျး ကွိုးစားနကွေပါတယျ​။ တခြို့လူတှကေ အောငျ​မွငျ​မှုကို လငျြ​လငျြ​မွနျ​မွနျ​ရတယျ​၊ တခြို့က အခြိနျ​အတိုငျးအတာတဈ​ခုအထိ စောငျ့​ရတယျ​။ တခွားလူတှေ အောငျ​မွငျ​မှုကိုရနတေဲ့အခြိနျ​ သငျ​ကရောဘာကွောငျ့​မရနိုငျ​သေးတာလဲ? သူတို့ကွိုးစားနတေဲ့အခြိနျ​ သငျ​က ဘာကွောငျ့​ ကွိုးစားမနတောလဲ? မေးမယျ​ဆိုရငျ​မေးခှနျးတှကေတော့ အမြားကွီးထှကျ​လာမှာပါ။ ဒါဆို အခုပဲ “အောငျမွငျဖို့အတှကျ ဒီအခကျြ (၅) ခကျြကို လိုကျနာဆောငျရှကျပါ” ဆိုတဲ့ ဆောငျးပါးလေးကို လလေ့ာပွီး မိမိကိုယျ​ကိုပွုပွငျ​ပွောငျးလဲလိုကျ​ကွရအောငျ​။
၁။ ပငျြးရိခွငျးကို စှနျ့လှတျပါ
တကျ​တကျ​ကွှကွှနဲ့ လုပျ​ငနျးတှကေို ဆောငျ​ရှကျ​နတေဲ့လူတှရှေိသလို ဘာမှလုပျ​ခငျြ​စိတျ​မရှိဘဲ ပငျြးရိနတေဲ့လူတှလေညျး အမြားအပွားရှိပါတယျ​။ ပငျြးရိခွငျးကတော့ လူအမြားစုအတှကျ​ အောငျ​မွငျ​မှုကိုသှားတဲ့ လမျးပျေါမှာ ကွီးမားတဲ့ အတားအဆီးကွီးတဈ​ခုဆိုရငျ​လညျးမမှားပါဘူး။ အလုပျ​လုပျ​မှာကိုပငျြးနရေငျ​ အနာဂတျ​မှာ ထမငျးနပျ​မှနျ​မှနျ​စားရဖို့တောငျ​ မသခြောပါဘူး။ ကြှနျ​တျော​တို့ လူငယျ​အမြားစုဟာ အလုပျ​(ပနျးတိုငျ​ကိုရောကျ​အောငျ​)ကွိုးစားမယျ့​အစား တဈ​နကေုနျ​ TV ထိုငျ​ကွညျ့​၊ သီခငျြးနားထောငျ​၊ ဂိမျးဆော့ စသညျ​ဖွငျ့​ တခွားအရာတှမှော အခြိနျ​ကုနျ​နကွေပါတယျ​။ အထကျ​ဖျော​ပွပါအရာတှကေို မလုပျ​ရဘူးလို့ ဆိုလိုတာတော့မဟုတျ​ပါဘူး။ အခြိနျ​ အကနျ့​အသတျ​လေး ထားဖို့တော့ သတိပေးခငျြ​ပါတယျ​။ အလုပျ​ကို တကျ​တကျ​ကွှကွှနဲ့ အာရုံစူးစိုကျ​ပွီးလုပျ​လေ အောငျ​မွငျ​မှုကိုမွနျ​မွနျ​ရရှိဖို့ အခှငျ့​အရေးမြားလပေါပဲ။
၂။ မဖွဈနိုငျဘူးဆိုတာကို ခေါငျးထဲကထုတျပဈပါ
လောကမှာ တခြို့လူတှအေောငျ​မွငျ​နကွေတယျ​ဆိုတာ မှနျ​ပါတယျ​။ ဒါပမေယျ့​ အခုအခြိနျ​ထိ သငျ​ မအောငျမွငျ​သေးလို့ စိတျ​ဓာတျ​ကြ၊ အားငယျ​စရာမလိုပါဘူး။ လူတိုငျးဟာ ကိုယျ့​အခြိနျ​နဲ့ကို သှားနကွေတာပါ။ တခြို့က ငယျ​ငယျ​ရှယျ​ရှယျ​နဲ့ အောငျ​မွငျ​မှုကိုရရှိတယျ​။ တခြို့ကအသကျ​ကွီးမှ အောငျ​မွငျ​မှုကိုရရှိတယျ​။ ဥပမာ – အမရေိကနျ​ပွညျ​ထောငျ​စုရဲ့ ၄၄ ဆကျ​မွောကျ​သမ်မတ မဈ​စတာ အိုဘားမား ဟာဆိုရငျ​ အသကျ​ ၄၈ နှဈ​အရှယျ​မှာ သမ်မတ ဖွဈ​တယျ​။ ၄၅ ဆကျ​မွောကျ​ သမ်မတ မစ်စတာ ဒျေါနယျ​ ထရနျ့​ ကတြော့ ရ၁ နှဈ​မှ သမ်မတ အဖွဈ​ တာဝနျ​စတငျ​ထမျးဆောငျ​တယျ​။ ဘယျ​အသကျ​အရှယျ​မှာ ဘာဖွဈ​ရမယျ​လို့လဲ ပုံသနေညျးမရှိပါဘူး။ ဒါကွောငျ့​ ဒီ နံပါတျ​ ၂ အခကျြ​ကိုဖွရှေငျးဖို့ ကိုယျ​ ဘာကိုစိတျ​ဝငျ​စားတယျ​ဆိုတာကိုရှာဖှပေါ၊ စိတျ​ဝငျ​စားတဲ့အရာကို ဘယျ​လို အကောငျ​အထညျ​ဖျော​မယျ​ဆိုတာကို စီစဉျ​ပါ၊ မသိရငျ​လညျး အတှအေ့ကွုံရှိတဲ့ သူတှဆေီကနသေငျ​ယူပါ၊ လိုအပျ​တဲ့ ပညာရပျ​တှကေိုလညျး လလေ့ာပါ။
၃။ အလှယျတကူ အရှုံးမပေးပဲ ဇှဲရှိရှိနဲ့ ကွိုးစားပါ
တရုတျ​နိုငျ​ငံအခွစေိုကျ​ Alibaba Company ရဲ့တညျ​ထောငျ​သူ ဂကျြ​မားကိုတော့ လူတိုငျး သိကွမယျ​ထငျ​ပါတယျ​။ တရုတျ​နိုငျ​ငံမှာရှိတဲ့ အခမျြးသာဆုံးလူတှထေဲကတဈ​ယောကျ​ဆိုရငျ​လညျးမမှားပါဘူး။ ကြှနျ​တျော​တို့အခုမွငျ​နရေတာကတော့ သူ့ရဲ့ ကွီးကယျြ​ခမျးနားတဲ့ အောငျ​မွငျ​မှုတှပေါ။ ဒီအောငျ​မွငျ​မှုတှကေို ဘာမှမလုပျ​ပဲ အလကားရလာတာမဟုတျ​ပါဘူး။ ကွိမျ​ဖနျ​မြားစှာကွိုးစားခဲ့ဖူးသလို ကလြညျးကရြှုံးဖူးခဲ့ပါတယျ​။ တရုတျ​ပွညျ​ကို KFC ဆိုငျ​ရောကျ​လာတဲ့အခြိနျ​ အလုပျ​သှားလြောကျ​တယျ​။ အယောကျ​ ၃၀ မှာ ၂၉ ယောကျ​ အရှေးခံရတယျ​။ သူမပါဘူး။ ရဲစခနျးမှာ လူချေါနတေုနျးသှားလြောကျ​ပွနျ​တော့လညျး ၅ ယောကျ​မှာ ၄ ယောကျ​အရှေးခံရတယျ​။ သူတဈ​ယောကျ​တညျးကနျြ​ခဲ့တယျ​။ အမရေိကနျ​နိုငျ​ငံက Harvest တက်ကသိုလျ​ဝငျ​ခှငျ့​သှားလြောကျ​တော့လညျး ၁၀ ကွိမျ​တိုငျ​တိုငျ​ အပယျ​ခံခဲ့ရတယျ​။ ဒါပမေယျ့​ သူ ဘယျ​တော့မှလကျ​မလြော့ခဲ့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ အရှုံးမပေးပဲ ဇှဲရှိရှိနဲ့ကွိုးစားခဲ့တဲ့ ရလဒျ​ကတော့ ဘီလီယံနာသူဌေးကွီးဖွဈ​နတောပါပဲ။ ဒါ့ကွောငျ့​ သငျ​ကွိုးစားနသေရှေ့ ဘယျ​တော့မှ ကရြှုံးမှာမဟုတျ​ပါဘူး။
လူတိုငျးဟာ တဈ​နညျးမဟုတျ​၊ တဈ​နညျးနဲ့ အခြိနျ​ဆှဲနကွေတာပါပဲ။ နညျးတာ၊ မြားတာပဲကှာမှာပါ။ ဘာကွောငျ့​ လူတှေ အခြိနျ​ဆှဲကွတာလဲ? အခြိနျ​ဆှဲရငျ​ရော ဘယျ​လိုအကြိုးကြေးဇူးတှေ ရလို့လဲ? အခြိနျ​ဆှဲတယျ​ဆိုတာ အခြိနျ​ကို ကွိုးနဲ့ခညျြ​ပွီးဆှဲတာတော့မဟုတျ​ပါဘူး။ မိမိလုပျ​ကိုလုပျ​ရမယျ့​ အလုပျ​(ကိစ်စ) တဈ​ခုကို မလုပျ​ပဲ တဈ​ခွားတဈ​ခုကို လုပျ​နတောမြိုးကိုဆိုလာပါတယျ​။ ဥပမာ – နောကျ​တဈ​ပတျ​ ဖိုငျ​နယျ​ စာမေးပှဲ ဖွရေတော့မယျ​။ စာကကျြ​ကိုကကျြ​ရတော့မယျ့​ အခွအေနေ။ ဒါပမေယျ့​ စာကကျြ​မယျ့​အစား သူငယျ​ခငျြးတှနေဲ့ လြှောကျ​သှား၊ ဂိမျးဆော့၊ TV ကွညျ့​ စသညျ​ဖွငျ့​ တခွားအရာတှကေို လုပျနတောမြိုးပါ။ အဲ့ဒီအခြိနျ​မှာ တခွားအရာတှကေ မိမိလုပျ​ရမယျ့​ အရာထကျ​ ပိုပွီး ဆှဲဆောငျ​မှုရှိနနေိုငျ​ပါတယျ​။ ဒါ့ကွောငျ့​ပဲ ဒီလိုအခြိနျ​ဆှဲနရေငျ​ ကိုယျ​ရနိုငျ​တဲ့ ရလဒျ​ကိုမရပဲ ပိုနိမျ့​တဲ့ရလဒျ​မြိုးကိုရနတေတျ​တာပါ။ အခြိနျ​ဆှဲတာနဲ့ ပတျ​သတျ​ပွီးတော့ ကြှနျ​တျော​ ဆောငျးပါးလေးတဈ​ပုဒျ​ရေးဖို့ရှိပါတယျ​။ အဲ့ဒီဆောငျးပါးမှာတော့ အခြိနျ​ဆှဲတာနဲ့ ပတျ​သတျ​တဲ့ ဗဟုသုတတှကေိုမြှဝပေေးသှားမှာပါ။
မအောငျ​မွငျ​တဲ့လူတှမှောရှိတဲ့ အထငျ​ရှားဆုံးလက်ခဏာတှထေဲကတဈ​ခုကတော့ သူမြားကို အပွဈ​တငျ​ခွငျးပဲဖွဈ​ပါတယျ​။ ဒီလိုလူတှဟော သူတို့လိုခငျြ​တာကို မရရငျ​ အဲ့ဒီဖွဈ​ရပျ​နဲ့ သကျ​ဆိုငျ​တဲ့ အရာတှကေို အပွဈ​တငျ​တတျ​ကွပါတယျ​။ တာဝနျ​ယူမှု၊ တာဝနျ​ခံမှုလညျး ရှိသငျ့​သလောကျ​မရှိကွပါဘူး။ ဥပမာ – အဖှဲ့အစညျးက ခမြှတျ​ထားတဲ့ ပနျးတိုငျးတဈ​ခုကို အတူတူလုပျ​ဆောငျ​ကွတယျ​။ အောငျ​မွငျ​မှုကိုရခဲ့ရငျ​ သူတို့အမြားစုက နာမညျ​ကောငျးယူတယျ​။ ဒါပမေယျ့​ မအောငျ​မွငျ​ရငျ​ တခွားသူတှကေို အပွဈ​တငျ​တယျ​။ ဒါကတော့ တျော​တျော​လေးကို မကောငျးတဲ့ စရိုကျ​ထဲမှာလညျး ပါပါတယျ​။ လူတိုငျးစိတျဓာတျ​ကနြတေဲ့အခြိနျ​ သူတို့ကို အပွဈ​သှားတငျ​ရငျ​တော့ အဲ့ဒါဟာ တကယျ့​ကိုဆိုးရှားတဲ့ လုပျ​ရပျ​ပါပဲ။ အဲ့လိုအပွဈ​တငျ​နမေယျ့​အစား အမှားတှကေနသေငျ​ခနျးစာယူ၊ လိုအပျ​တဲ့ skill တှကေိုလလေ့ာ၊ အပျေါမှာဖျော​ပွခဲ့တဲ့ အခကျြ ၄ ခကျြ​စလုံးကို လိုကျနာဆောငျရှကျပါ။ ဒီလိုဆိုရငျ​တော့ အောငျမွငျမှုက သငျ့ရဲ့ လကျတဈကမျးမှာ ရှိနပေါလိမျ့မယျ။
အပျေါမှာ ဖျော​ပွခဲ့တဲ့ အခကျြ​တှအေကုနျ​လုံးဟာ သငျ့​အတှကျ​ အကြိုးရှိမယျ​လို့မြှျော​လငျ့​ပါတယျ​။ အကွံပွု၊ ဖွညျ့​စှကျ​လိုတာရှိရငျ​ comment မှာရေးသားဖွညျ့​စှကျ​နိုငျ​သလို Chat box ကလညျးလာရောကျ​ အကွံပွုနိုငျ​ပါတယျ​။ သငျ​ဖတျ​ခငျြ​တဲ့ ခေါငျးစဉျ​လေးတှရှေိရငျ​လညျး comment မှာရေးထားခဲ့နိုငျ​ပါတယျ​။ ဖတျ​ရှုသူတှအေတှကျ​ အကြိုးရှိပွီး အရညျ​အသှေးပွညျ့​မှီတဲ့ ဆောငျးပါးတှရေေးဖို့ ကြှနျ​တျော​တို့ အမွဲကွိုးစားနပေါတယျ​။ အဆုံးထိ ဖတျ​ပေးတဲ့အတှကျ​ ကြေးဇူးအထူးတငျ​ရှိပါတယျ​။ Please don’t forget to like and see first! ?
Swedish Institute Scholarships for Global Professionals (SISGP) Fully Funded
Hein Htet Win| November 21, 2019
Yokohama National University Scholarship in Japan 2020
Khin Thin Thin Yu| November 19, 2019
Youth Leadership Forum 2019
ZuKo Lwin| November 17, 2019
Shanghai Jiaotong University Scholarship2020
Thaw Thaw Zin| November 16, 2019
GLOBAL CHANGE LEADERS 2020
Hsu Lei Nwe| November 14, 2019
Swedish Institute Scholarships for Global Professionals (SISGP) Fully Funded November 21, 2019
Yokohama National University Scholarship in Japan 2020 November 19, 2019
Youth Leadership Forum 2019 November 17, 2019
Shanghai Jiaotong University Scholarship2020 November 16, 2019
GLOBAL CHANGE LEADERS 2020 November 14, 2019